Avadiho Pro: Plugin-n'ny Popup Opt-In Opt-In ho an'ny WordPress | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 19, 2020 Alarobia, Febroary 9, 2022 Douglas Karr
Nomena ny fanapahana ny WordPress amin'ny maha rafitra fitantanana votoaty azy dia mahagaga fa tsy dia misy fandinihana kely ao amin'ny sehatra fototra raha ny tena izy fiovam-pony. Saika ny famoahana rehetra - na orinasa izany na bilaogy manokana - dia toa manova ny mpitsidika ho mpanjifa na ho avy. Na izany aza, tsy misy singa ao anatin'ny sehatra fototra ahafahana mandray ity hetsika ity.
Miverena Pro dia plugin WordPress feno izay manolotra tonian-dahatsoratra drag & drop, endri-javatra mahaliana amin'ny finday, ary plugin iray izay tsy hisintona ny hafainganan'ny tranokalanao WordPress. Ny plugin dia manome fahalalahana amin'ny famolavolana feno, fanentanana amin'ny fitondran-tena, manana fampidirana taonina, ary modely tsara tarehy iray taonina hanombohana.
Sintomy ny Convert Pro ho an'ny WordPress
Avadiho ny Pro - Plugin amin'ny fidirana amin'ny mailaka fidirana sy ny lohateny fitarihana
Miverena Pro no plugin mora tampoka WordPress mahomby indrindra izay azo ampiasain'ny mpivarotra an-tserasera, bilaogera, tranokala e-varotra, mpamorona ary orinasa kely sy lehibe hafa maniry hampitombo ny fiovam-po ao amin'ny tranonkalany. Anisan'izany ny:
Exit Intent Technology - Miaraka amin'ny Pro Pro dia afaka mitazona mora foana ireo mpitsidika mandao ianao. Mamolavola sy mandefasa hafatra mahasarika hisarika ny saina!
Fitsapana mora A / B - Ny endri-javatra fitsapana A / B an'ny Convert Pro dia mamela anao hamorona karazana, hitsapa azy ireo ary hitandrina izay mety indrindra amin'ny mpihaino anao.
Popup Dingana marobe - Miaraka amin'ny Pro Pro, afaka mamorona popup marobe ianao toy ny popup fanamarinana taona, eny tsia popup, ary maro hafa!
Mamaly tanteraka - Mandray andraikitra tanteraka i Convert Pro. Ny endriny rehetra noforonina tamin'ny fampiasana ity plugin ity dia fitaovana, mpampiasa ary Google friendly.
Amin'ny Click Popups - Ankoatry ny safidy goavambe goavambe dia azonao atao koa ny mamorona popup miseho rehefa tsindrio ny mpampiasa ny lahatsoratra, sary, bokotra, sns.
Advanced Targeting - Ampiasao Pro Pro ary mamorona hafatra manokana izay azo aseho amin'ny fotoana mety, alohan'ny mpihaino mety.
Fampidirana mailaka - Miasa tsy misy tomika miaraka amin'ny mpamatsy auto-auto sy mpamatsy mailaka mailaka ny Convert Pro. Miaraka amin'ny fiasa fampidirana sy fanondranana tokana, ny angon-drakitra mailakao sarobidy dia mandaitra sy mailaka ankehitriny. Ny fampidirana tsindry iray dia manamora ny fiasa amin'ny fametrahana haingana hanangonana sy hitantanana angona firaketana.
Miverena Pro dia plugin mafy orina izay hanampy anao hanangana lisitry ny mailaka, handroaka ny fifamoivoizana, hampiroborobo ny horonan-tsary, hampiroborobo ny tolotra ary hanao izay mahasoa ny vola laninao amin'ny marketing. Raha mitady fitaovana marketing toa izao ianao dia safidy mora vidy ny Convert Pro!
Avadiho ny fampidirana Pop mailaka an'ny Pro
Anisan'izany ny fampidirana ActiveCampaign, AWeber, Benchmark, Fanaraha-maso fanentanana, Campayn, CleverReach, foana Contact, ConvertFox, ConvertKit, Customer.io, Drip, ElasticEmail, GetResponse, Hubspot, iContact, Infusionsoft, Klaviyo, Mad Mimi, Mailchimp, MailerLite, Mailgun, Mailjet, MailPoet, Mailster, MailWizz, Mautic, Moosend, ONTRAPORT, SendFox, SendGrid, SendinBlue, Sendlane, SendReach, Sendy, SimpleCast, TotalSend, VerticalResponse, ary Zapier.
Tags: ab testingActiveCampaignAWeberbenchmarkCampaign MonitorCampaynCleverreachfoana Contactmanova ny proConvertFoxConvertKitCustomer.ioMiteteElasticEmailGetResponsehubspotiContactInfusionsoftKlaviyoMad MimimailchimpmailerlitemailgunmailjetMailPoetMailsterMailWizzMauticMoosendpop-dingana marobetsindrio eo amin'ny pop-popupontraportpop uppop targetSendFoxsendgridSendinBlueSendlaneSendReachSendySimpleCastTotalSendmitsanganaWordPressplugin plugin popup wordpresszapier